Global Voices teny Malagasy » Maraoka: Ny Fetiben’ny hira masina manerantany ao Fez · Global Voices teny Malagasy » Print
Maraoka: Ny Fetiben'ny hira masina manerantany ao Fez
Voadika ny 10 Jolay 2018 7:22 GMT 1	 · Mpanoratra Jillian C. York Nandika Miranah
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Maraoka, Fivavahana, Mediam-bahoaka, Mozika, Teratany, Zavakanto & Kolontsaina
(Marihana fa efa tamin'ny volana Jiona 2008 ny lahatsoratra teny Anglisy)
Satria efa akaiky ny Fetiben'ny Mozika Masina Manerantany  andiany faha-14 fanao isan-taona ao Fez – mizara ny zava-niainan'izy ireo tamin'ny fetibe tamin'ity taona ity ireo bilaogera Maraokana ao an-toerana sy ireo mpandehandeha. Ireo bilaogeran'ny View from Fez, izay tsara vintana kokoa nanatrika ny zava-drehetra tamin'ny fetibe rehetra, nizara ny sombiny nankafizin'ireo indrindra  tamin'ny fetibe, iray amin'izany ilay mpihira Sami Mari Boine :
Ny Mozea Batha no toerana nalainay ho anisan'ny fampisehoana miavaka indrindra hanatontosana manontolo ny Fetiben'ny Hira Masina ao Fez – ary tsy diso fanantenana izahay. Mpanakanto mahavariana i Mari Boine ary mazia tsotra izao ny fifantenana ny hira sy ny tononkiran'i Sami.
Tena niavaka tahaka izany koa ny fikarakarana sy ny fampisehoan'ny tariny. Nivoaka tsara ny gitaran'i Georg Buljo tamin'ny alalan'ny hira niaraka tamin'i Svein Schultz teo amin'ny beso, Ole Jorn Mykelbust tamin'ny trompetra ary Gunnar Augland tamin'ny vely amponga. Nanomboka tamin'ny famoahany ny fandaharany, nanome ny tsirony tamin'ny sangan'asany teo aloha niaraka tamin'i Gula Gula i Boine ary nampiseho ny hirany nentim-paharazana tamin'ny alalan'ny feo mangovitra tamin'ny fiangeso mahatalanjona. Ho an'ireo izay zatra mijery mpihira manokatra be ny vavany mba hahazoana naoty ambony, tena mahagaga ny fidoboky ny feo sy ny feo fotsiny notanterahin'i Boine tamin'ny molotra saika mikatona. Nanampy be dia be ny hatsaran'izany ny ampogany, saingy araka ny nolazainy hoe – “Zatra ny vanim-potoana mangatsiaka ny ampongako.” Noho izany, nandena ny hoditra tamin'ny tavoahangy Sidi Ali izy!
Satria mifarana ny fetibe, View from Fez mamintina izany  amin'ny teny fohy:
Nine days of afternoon and evening concerts, Sufi nights, art exhibitions, children's events, free concerts in the medina and the new city, Rencontres debates on the sacred, more talks at Palais Jamai, fringe events at Dar Batha … all in all a very busy time. How was it for you?
Fampisehoana sivy andro ny tolakandro sy ny hariva, alina Sufi, fampiratiana zavakanto, hetsika ho an'ny ankizy, fampisehoana maimaim-poana ao amin'ny medina sy ny tanàna vaovao, fifanakalozan-dresaka momba ny hira masina, resaka hafa ao amin'ny Palais Jamai, tranga maromaro ao Dar Batha … ao anatin'ny fotoana feno avokoa. Nanao ahoana izany taminao?
Nahazo tsikera vitsivitsy tamin'ny hetsika tamin'ity taona ity ihany koa izy ireo…
2008 was not a vintage festival and one is left with the impression that the programme was assembled on a very tight budget. The feeling is that the Fes Festival needs more money pumped into the artistic director's function of booking artists. In years past we've seen luminaries like Youssou N'Dour and Ravi Shankar, but such stars seem to be sadly missing these days.
Tsy fetibe mahazatra ny taona 2008 ary nisy nihevitra fa natao tamin'ny tetibola voafehy tsara ny fandaharana. Ny fahatsapana dia hoe mila vola betsaka kokoa alefa any amin'ny asa famandrihana mpanakanto ataon'ny talen'ny zavakanto ny Fetibe Fes. Tao anatin'ny taona vitsy, nahita olo-malaza tahaka an'i Youssou N'Dour sy Ravi Shankar isika, nefa indrisy fa tsy hita tao ho ao ireny kintana ireny.
…Saingy faly tamin'ny asa amin'ny ankapobeny:
It's a huge job putting on such a big Festival, and The View from Fez congratulates the whole team.
Asa goavana ny nanatontosàna ny Fetibe goavana tahaka izao, ary miarahaba ny ekipa rehetra ny View from Fez
Tao amin'ny Fetibe Fez ihany koa ny Everything Morocco, ary nizara  ity zava-mamy ity:
Overall, this week at the Fez Festival has been a series of pleasant surprises, particularly Fahdel Jaziri's production of Hadhra and Abdelwahab Doukkali's special performance Thursday night at Bab Makina. We have seen Touaregs on the electric guitar, R&B saxophone in an Arab orchestra and all sorts of traditional instruments from every region of the globe. And there is no better place than Fez for all of this to come together at one time.
Amin'ny ankapobeny, andiana zava-tsy nampoizina mahafinaritra ity herinandro ity tao amin'ny Fetibe Fez, indrindra ny famokaran'i Fahdel Jaziri ny Hadhra sy ny fampisehoana manokan'i Abdelwahab Doukkal tamin'ny Alakamisy hariva tao Bab Makina. Nahita Touareg tamin'ny gitara elektrika izahay, R&B saxôfôna teo amin'ny orkestra Arabo ary zavamaneno nentin-drazana isan-karazany manerana ny faritra tsirairay manerantany. Ary tsy misy toerana tsara ankoatra an'i Fez ahitana izany rehetra izany ao anatin'ny fotoana iray.
the art of the drum, izay vao avy namakivaky izany fotoana izany, nanan-kolazaina maro  momba ny fironana ara-barotry ny fetibe:
Amin'ny dikany tena fototra, mikasa hamorona fifandraisana ara-panahy amin'ny Nahary ny mozika masina. Matetika voafetra tanterahina amin'ny toerana masina ny hiram-pivavahana, tahaka ny fiangonana na tempoly, mba hanafoanana ny fanelingelenan'izao tontolo izao. Amin'ny fotoanan'ny fampisehoana hira masina, tsy ny tempoly ve no sehatra? Fomba fampianaran'ny fivavahana rehetra mba tsy hankasitraka izay karazana ara-barotra rehetra ao anatin'ny sehatry ny fikambanana izany? (Eny, eny, efa tany amin'ny tempoly Haindò marobe izay mivarotra fahatsiarovana aho, ary manana fivarotana fanomezana ny Vatican). Azo antoka fa ny Jaona 2:16 dia tsy fijery Kristianina ihany – tsy misy toerana ao anatin'ny moske na sinagoga na karazana fitoerana masina inona idiran'ny materialisma. Ahoana no ahafahana manatontosa fanompoana sahaza ho an'ny Nahary raha misy mpivarotra mihanika an'i Hagaan Daz tsy lavitry ny sehatra? Ahoana no hanavahantsika ny fanajana sy ny fanararaotana?
Niresaka momba ny dikan'ny “orientalisma (fironana atsinanana)” momba ny hetsika ihany koa izy:
Zavatra iray hafa hanohanako ny fetibe ny dika goavan'ny Orientalisma izay manenika ny fetibe. Ny foto-kevitry ny Orientalisma, araka ny nosoratan'ilay manam-pahaizana ambony Edward Said, dia milaza mazava fa any [amin'ny firenena t]andrefana, manana fomba fijery feno hevi-dravina momba ny kolontsaina tatsinanana isika. Noho izany amin'ny resaka “fianarana ara-pinoana” fotsiny, misy ireo Tandrefana sasany mahita ny fivavahana Tatsinanana ho “mistika” kokoa noho ny fomba fanao Tandrefana, ka noho izany “tsara kokoa” izy ireo. (Hitanao matetika any India, ireo Tandrefana “mandray” ny Haindoisma noho ny fototry ny fivavahana Tatsinanana)
Hoy ihany koa ilay bilaogera:
Mazava loatra fa manana fahatsapana matanjaka momba ny fototry ny Fetiben'ny Hira Masina Manerantany ao Fez aho. Inoy na tsia, araka ny hovakianao amin'ny lahatsoratra manaraka ny ny zava-niainako tamin'ny fampisehoana, tena nankafy tanteraka ny fetibe aho – na dia teo aza ireo zava-mampisalasala maro dia maro momba izany. Raiso tahaka ny vaingan-tsira iray izay soratako; araka ny nolazain'i Man Ray indray mandeha hoe, “tokony hovonoina ho faty ireo mpitsikera rehetra.”
Sarin'i Ismael Lo sy ny mpirahalahy Hamadcha avy amin'ny The View from Fez 
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/07/10/121660/
 Fetiben'ny Mozika Masina Manerantany: http://www.fesfestival.com/en07/fes-sacred-music-presentation.php
 nizara ny sombiny nankafizin'ireo indrindra: http://riadzany.blogspot.com/2008/06/mari-boine-stunning-concert.html
 Mari Boine: http://en.wikipedia.org/wiki/Mari_Boine
 mamintina izany: http://riadzany.blogspot.com/2008/06/fes-festival-its-wrap.html
 nanan-kolazaina maro: http://theartofthedrum.blogspot.com/2008/06/fes-festival-of-world-sacred-music.html
 The View from Fez: http://riadzany.blogspot.com